डब्बल नेकपा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) मा हाल भइरहेको शीर्ष नेताहरूको शक्ति संघर्षमा देशको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ । एकतावद्ध भएको अढाइ वर्ष पनि नबित्दै पार्टी नै फुट्ने हो कि र देश फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा फस्ने हो कि भन्ने जोखिम टड्कारो रूपमा खडा भएको छ ।
करिब डेढ साताअघि ४४ सदस्यीय नेकपाको स्थायी कमिटीको नियमित बैठकमा ३१ सदस्यले दुवै पदमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार निकै मौलाएको र सरकारका कारणले पार्टी आम जनसमुदायमा धेरै बदनाम र अलोकप्रिय हुँदै गएको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैपदबाट केपी ओलीको राजीनामा मागेपछि सल्किएको भीषण द्वन्द्वको आगो अहिलेसम्म निभेको छैन । कतैबाट कुनै चमत्कार नभएमा तत्काल निभ्ने छाँटकाँट पनि देखिँदैन ।
जगजाहेर छ, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालयमा प्रम ओली चरम अल्पमतमा छन् । पार्टीको संसदीय दलमा समेत उनको बहुमत रहेको स्थिति देखिँदैन ।
तथापि प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट आफूले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने कडा अडान राखेका छन् । यस्तो अडानले पार्टीकाे फुट अवश्यम्भावी हुने र सरकारसमेत कुनै पनि बेला ढल्ने निश्चितप्रायः हुनाले उनका केही निकटस्थ सल्लाहकार र सहयोगीहरूले समेत उनलाई पार्टी अध्यक्षमा राजीनामा नदिएर प्रम पदबाट राजीनामा दिने सल्लाह दिएको बुझिएको छ । त्यसलाई पनि उनले स्वीकार गरिरहेको देखिँदैन ।
उता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), भूपूप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दुवै पदबाट नभए पनि कमसेकम एउटा मुख्य पदबाट प्रम ओलीले राजीनामा दिनैपर्ने अड्डी कसिरहेका छन् ।
केपी ओली सबैभन्दा कमजोर बनेको यो समयमा उनलाई साइजमा नल्याए कहिल्यै ल्याउन सकिन्न भन्ने उनीहरूको विश्लेषण देखिन्छ ।
परन्तु जुन पार्टीको आफैँ सर्वोच्च नेता छन्, त्यो पार्टीमा फुट हुने सर्तमा पनि दुवै पद नछोड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अडानमा कुनै मलिनता आएकोे देखिँदैन ।
उनी नेपाली राजनीतिका कच्चा खेलाडी होइनन् । एक थरीको आशंका छ, कतै अरु सबैको आँखा उनीतिर सोझिएका बेला उनको आँखा चाहिँ कांग्रेससित मिलेर संसदबाट एमसीसी पास गर्ने दाउतिर सोझिएको त होइन ? कतै अहिले यो पार्टी ज्यूँका त्यूँ रहुन्जेल कुनै पनि हालतमा संसदबाट एमसीसी पास गर्न सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा ओली पार्टी फुटलाई पनि सहजै स्वीकार्दै एमसीसीकै लागि संसदमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणतिर अघि सरेका त होइनन् ?
सम्भवतः यही कारण हुनुपर्छ, ओली पार्टी फुटका लागि सबैलाई अचम्मित पार्ने ढंगले तम्तयार देखिन्छन् । सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई समेत थाहा नदिई भएको संसदको दुवै सदनको बजेट अधिवेशनको अप्रत्याशित अन्त्य गर्ने उनको कदम पार्टी फुटाउनका निम्ति अहिले भएभन्दा सजिलो विधिसहितको अध्यादेश जारी गर्नका लागि हो भन्ने कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।
यही समयमा आफ्नै युवाहरू परिचालित गरी निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टीको दर्ता गर्नु केवल संयोग मात्र हुन सक्दैन । यही बीचमा उनले एमसीसी हर हालतमा पास गर्नैपर्छ भनेर लगातार भनिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासित पनि अति गोप्य कुराकानी गर्न भ्याइसकेका छन् । उनीसित निरन्तर कुरा गर्नका लागि उनले एक जना संवाद कुशल वार्ताकार पनि छुट्याइसकेका छन् ।
अहिले दुई थरीबीचको फुटको गाँठो फुकाउन मध्यमस्तरका नेताहरूले धेरै चरणमा कुरा गरिसके पनि एकताको सूत्र फेला अझै पनि पार्न सकेका छैनन् । दुई अध्यक्षका बीचमा वान टु वान संवाद पनि धेरै खेप भइसकेको छ, तर दुवै नेता यो पंक्ति कोरिरहँदासम्म आ–आफ्नो अडानबाट टसकाे मस भएका छैनन् ।
यस परिप्रेक्ष्यमा मध्यमस्तरका नेताहरूले कुनै चमत्कार गरिहालेमा छुट्टै कुरो हो, नत्र डब्बल नेकपाको फुटको केवल औपचारिक घोषणा मात्र हुन बाँकी छ । अनौपचारिक रूपमा यसको फुट भई नै सकेको छ ।
अहिले नेकपामा उदेकलाग्दो विडम्बना विद्यमान छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिंहदबारको घुम्ने कुर्सीका लागि बाहिरबाट त्यति खतरा छैन, जति नेकपाभित्रैबाट छ । त्यस्तै, नेकपाको एकताको निरन्तरताका लागि बाहिरबाट त्यति जोखिम छैन, जति यसका माथिल्ला अगुवा स्वयमबाट छ ।
पार्टीभित्रको स्थिति यस्तो भएपछि कुनै पनि पार्टी लामो समयसम्म एकतावद्ध भएर कसरी रहन सक्छ ? त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको व्यक्तित्व वनका दुई भाले सिंहहरूको जस्तो छ, जो कसैको मातहतमा कसैको खटनपटनमा एउटै भूक्षेत्रमा मिलेर बस्न सक्दैनन् ।
राजा महेन्द्र र बीपीको बीचमा जस्तै यी दुईका बीच निरन्तर टकराव, घृणा र सन्निकटताको सम्बन्ध छ ।
नेकपा यस्तो दल हो जहाँ एकताकै बेला फुटको जग हालिसकिएको थियो । विनाविचार र सिद्धान्तको गणितीय पार्टी एकता भनेको तासको घर हो, जसलाई स–सानो हावाकाे झाेंकाले समेत कुनै पनि बेला गर्ल्यामगुर्लुम ढाल्न सक्छ ।
पार्टी एकता भनेको सिङ, टाउको र शरीर सिंगैको जैविक एकता हो । अर्थात् यो सांगठनिक एकता मात्र होइन, यो विचार–सिद्धान्त, क्रान्तिसम्बन्धी रणनीति र भावनासहितको एकता हो ।
परन्तु डब्बल नेकपाको पार्टी एकता केवल यान्त्रिक र गणितीय रह्यो, यो सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक र जैविक हुन सकेन । पहिले आपसमा सिँगौरी खेलेर लडिरहेका दुई भाले सिंहलाई सत्तास्वार्थको मसिनो डोरीले बाँधेर यही हो हाम्रो पार्टी एकता भनियो । सबैले पत्याइदिए पनि ।
आफैँले जारी गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी चरित्रको संविधान र चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर सरकारले भटाभट रूपान्तरणकारी र लोकप्रिय काम गर्न सकेको भए पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने हैसियत कसैको हुनै सक्दैनथ्यो ।
परन्तु त्यस्तो पनि हुन सकेन । सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिँदै गए । भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न अभियुक्तको ढाल बनेर कार्यकारिणी प्रमुख स्वयम् खडा हुने स्थिति बारम्बार बन्नु शोभनीय कुरा पक्कै थिएन ।
पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा दुई वर्षमा देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्‍यो तर दुई वर्षका दौरानमा कृषिलाई छुट्याएको बजेट आधा घटाइयो ।
बचेखुचेको अर्धसामन्ती भू–संरचना र अनुपस्थित जमिनदारीलाई समाप्त पार्न कुनै प्रभावकारी भूमिसुधार तथा कृषिक्रान्ति गरिएन । चुनावी घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षा सवल बनाउने र निजी शिक्षालाई सेवामूलक बनाउने वाचा गरियो ।
तर, सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण तथा आमूल रूपान्तरण गर्नका लागि भनेर ल्याइएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई निजीक्षेत्रका नाफाखोर शैक्षिक माफियाको आग्रहमा अहिलेसम्म सार्वजनिकसम्म नगरी रछानमा मिल्काइयो ।
देशमा तीन–तीनवटा बजेट आइसक्दा पनि औद्योगिक क्रान्ति गरेर देशमा वनजन्य, कृषिजन्य, जलजन्य, जडीबुटीजन्य र सौन्दर्यजन्य उद्योगमा उथलपुथलकारी रूपान्तरण गर्ने पहल थालिएन ।
संविधान र चुनावी घोषणापत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भनिएको थियो । तर आज कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा शुल्क नतिरी उपचार हुँदैन ।
केही समयअघिको मात्र कुरा हो, ठूलो रोग लागेर टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएका मेरै छिमेकका एक जना श्रमिकका दुर्गम जिल्ला निवासी अति गरिब आफन्तलाई डाक्टरले भनेको जति पैसा जोहो गर्न नसकेपछि अप्रेसन नै नगरी अस्पतालबाटै निकालेर पठाइयो । यो त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । अति गरिबहरूको हरिबिजोगको यस्तो घटना हरेक अस्पतालमा हरेक दिन हुँदै छ ।
संविधानले बाटो समात्यो संघीयताको तर सरकारले बाटो समात्यो शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणको । संविधान र चुनावी घोषणापत्रले बाटो समात्यो लोकतान्त्रिक समाजवादको तर नेकपाकाे सरकारले बाटो समात्यो दलाल पुँजीवादी नवउदारवादको, जहाँ ठूला ठेकेदार, विचौलिया व्यापारी, भूमाफिया–स्वास्थ्य माफिया, शैक्षिक माफिया र दलाल पुँजीपति मात्र ज्यादा मोटाउँछन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सारा काम नवउदारवादी दलाल पुँजीवादको दिशामा लगेपछि केवल मतस्वार्थका लागि भनेर टाँगिएको कम्युनिस्ट पार्टीको साइनबाेर्डको कुनै अर्थ रहेन ।
यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग कुनै पनि बेला आउन सम्भव थियो । आएको पनि थियो । तर, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी र भारतद्वारा जारी गरिएको नक्साका विरुद्ध सिंगो देश एकढिक्का हुन जरुरी भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो माग भुसको आगोझैँ दबिएर बसेको थियो ।
तर एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्सा जारी गरेबापत भारतले उनलाई पदबाट हटाउन खोज्दै छ र दलकै नेताहरू भारतसित मिलेका छन् भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएपछि भित्र दबिएर बसेको त्यो आवाज अहिले विस्फाेट झैँ भएर बाहिर आएको मात्र हो ।
अहिलेको द्वन्द्वमा प्रधानमन्त्रीका विरोधी पक्ष निकै लोकप्रिय स्थितिमा हुँदा हुन् र उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा अहिलेभन्दा निकै राम्ररी प्रगतिशील तथा रूपान्तरणकारी काम गरेका हुँदा हुन् भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूले अहिले दिएजस्तो खुला चुनौती दिन सम्भव हुने थिएन ।
तर नेकपाको विडम्बना यो देखिन्छ कि त्यहाँ केपी ओलीबाहेक तीन–तीन जना प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तित्वहरू छन् । तर, कसैले पनि आफ्नो कार्यकालमा जनताको मन जित्ने ढंगले प्रगतिशील तथा रूपान्तरणकारी काम गर्न सकेको ट्रयाक रेकर्ड छैन । सबै सिंहदरबार बदल्न भनेर त्यहाँ गएका तर त्यसैमा विलीन भएका व्यक्तिहरू छन् ।
माथि भनिएका कारणका अलावा मूलतः तीनवटा कारणले डब्बल नेकपामा वर्तमान शक्ति संघर्ष यति चर्किएको देखिन्छ:
१) विगतमा पार्टी एकता केवल अंकगणितीय आधारमा त्रुटिपूर्ण ढंगले गरेका कारण नेकपा आफैँ गुट वा स्वार्थ समूहहरूको महासंघमा परिणत हुन जानु; २) विगतमा भएको प्रधानमन्त्री पद र अध्यक्ष पदको बाँडफाँटसम्बन्धी सहमतिलाई इमानदारीपूर्वक पालना नगरिनु; ३) पार्टी र सरकारमा पद वा जिम्मेवारीको विभाजन गरिँदा पार्टीका सबै गुट वा स्वार्थ समूहहरूलाई न्याय हुने ढंगले समावेशीतामूलक जिम्मेवारी विभाजन नगरिनु ।
अहिले यी कारणलाई सम्बाेधन गर्ने काम पार्टी र सरकारको नेतृत्वले थालेमा यो फुट टर्नै नसक्ने बिन्दुमा पुगिसकेको देखिँदैन । पार्टी फुट नहोस् भन्ने धारणा शीर्ष नेतृत्वभन्दा मुनि आमपार्टी पङ्क्तिमा अहिले पनि प्रवल रूपमा रहेको देखिन्छ ।
अहिले केन्द्रीय कमिटीका एक चौथाइ सदस्यले माग गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक अविलम्ब डाकेमा त्यसले अवश्यम्भावी बनेको पार्टी फुटलाई थोरै समयका लागि टार्ने मध्यमार्गी उपाय निकाल्न सम्भव छ ।
फेरि नेकपाको विशिष्टता यो छ कि त्यसमा नेतृत्व पङ्क्तिभन्दा कार्यकर्ता पङ्क्ति ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण र दूरदर्शी छन् । थप, अहिलेको दलसम्बन्धी कानुनले कुनै पनि पार्टी बनेको ५ वर्षसम्म नयाँ पार्टी खोल्ने र दर्ता गर्ने अनुमति दिँदैन ।
तथापि नेकपाको शीर्ष नेतृत्वको समस्या यो देखिन्छ कि उनीहरूमा अहङ्कार र स्वकेन्द्रिता निकै चर्को छ, विनम्रता र समुदाय केन्द्रितता शून्यबरोबर छ । उनीहरूको मुख ज्यादै सक्रिय छ, कान पुरै निष्क्रिय छ ।
उनीहरू चलाखी ज्यादा राख्छन्, विवेक ज्यादै कम राख्छन् । उनीहरूमा कुर्सीप्रेम अति ज्यादा छ, पार्टीप्रेम तथा देशप्रेम ज्यादै कम छ ।
माथि उल्लिखित विविध कारणहरू र नेकपा नेतृत्वको यी सजिलै नबदलिने बिशेषताहरूको कारण यो पार्टी लामो समयसम्म एकतावद्ध भइरहन धेरै गाह्रो छ ।
कुनै पनि कारणले यो पार्टी फुटेमा नेपाली राजनीतिमा त्यसको दूरगामी प्रभाव पर्नेछ ।
नेपालका वामपन्थीहरूले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत र ४८ प्रतिशत जनमत हासिल गर्दा पनि उनीहरूले समुचित ढंगले शासन गर्न सकेनन् ।
जति बहुुमत प्राप्त गरे पनि नेपाली वामपन्थीहरू शासन गर्नै जान्दैनन् भन्ने घातक सन्देश यसबाट जनमानसमा प्रभावित हुनेछ । वामपन्थीहरूले फेरि यति ठूलो जनमत हासिल गर्न धेरै लामो समय कुर्नुपर्नेछ ।
कुनै पनि पार्टीको संसदमा बहुमत कायम हुनेछैन । त्यसैले नेपालमा पुनः राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रको थालनी हुनेछ । पुनः अल्पमतको मिलीजुली सरकारको प्रवृत्ति सुरु हुनेछ । संघीय तह मात्र होइन, प्रदेश तह र स्थानीय तहका सरकारको नेतृत्व संरचनामा काफी धेरै फेरबदल आउनेछ ।
ठूलो जनमतप्राप्त स्थिर सरकार हुनाले विदेशीको चलखेल यसबीच कम भएर गएको थियो । फेरि त्यो चलखेल चर्को मात्रामा प्रारम्भ हुनेछ । भारी बहुमत प्राप्त बलवान सरकार तथा नेपालमा दलहरूका बीचको राष्ट्रिय सहमतिले विदेशी अतिक्रमणविरुद्ध लड्न सहज भएको थियो । अब त्यो स्थिति बाँकी रहने छैन ।
साइनबोर्ड मात्र सही, एकतावद्ध नेकपा चीन, भियतनाम र उत्तर कोरियापछिको एसियाकै चौथो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो । फुट भएमा यो दक्षिण एसियाकै चौथो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीसमेत बाँकी रहने छैन ।
जुनसुकै उपलब्धि पनि पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ तर गुमाउन धेरै सजिलो हुन्छ । धेरै लामो समयपछि निकै गाह्रोसित आएको उपलब्धि माथिदेखि तलसम्म अत्यधिक बहुमतको सरकार केही नेताका सनकको भरमा सजिलै समाप्त हुन लाग्दै छ । सम्बन्धित सबैलाई चेतना भया ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २६, २०७७, ११:२१:००